Nagarik News - मिस सुन्दरी चमेली
मिस सुन्दरी चमेली
शुक्रबार १७ जेष्ठ, २०७०
सुबेदार काकाको घरमा अचेल टिभी हेर्नेको घुइँचो लाग्छ। सोलारबाट चलाएको होम टिभीमा सेड्युल मिलाइएको छ। छोराछोरी स्कुल पठाएपछि बिहान १० बजे टोलभरिका महिला लोकदोहोरी हेर्छन्। दिउँसो कलेजबाट आएका केटाकेटी स्टार मुभीमा फिल्म हेर्छन्। बेलुका ८ बजे समाचार हेर्न रुचाउने जान्नेमान्नेको पालो। त्यसपछि हास्य सिरियल आउने दिन भने सुबेदार काकाको घरमा सानोतिनो मेला नै लाग्छ। माटोले पोतेको घर पूरै उप्किँदा भोलि बिहान सुबेदार्नी काकी टोलै थर्किने गरी गाली गर्छिन्। तर, त्यस्ता सिरियल आउने दिनसम्म उनको गाली सबैले बिर्सिन्छन्।
शुक्रवारको साँझ थियो, समाचार हेर्नका लागि गाउँका बुज्रुक सुबेदार काकाकहाँ पुगेका थिए। तर, समाचार आउन केही समय बाँकी भएकाले कौसीमै बहस चलिरहेका थियो– 'चुनाउ मरेकाटे हुँदैन', 'खिलराजलाई पनि डुबाउने भए', 'नेता भन्या प्रचण्डै हो' आदि/इत्यादि। नेपाली मनोरञ्जन च्यानल हेरिरहेको सुबेदारको नाति शंकर कुलर्िंदै बाहिर निस्क्यो, 'टिभीमा हाम्री चमेली देखिई।' आधा सल्काएको चुरोट, तान्दै गरेको सुल्पा फालेर सबै भित्रतिर कुदे। साँचो रहेछ, नरिभानकी छोरी चमेली टिभीमा थिई, मुसुक्क हाँसिरहेकी। सबै दंग परे। यत्तिकैमा घोषणा भयो, 'मिस सुन्दरी हुनुभएको छ, चञ्चल (चमेली) क्षत्री।' चमेली खुसीले उफ्रिई। एकदुई जनालाई अँगालो मारी र अघि बढी। उसलाई ताज पहिराइयो। 'रानी नै भइछे क्या हो,' एक जनाले ताज पहिरिँदै गर्दा भने। शंकरले प्रस्ट पार्‍यो, 'होइन, सुन्दरी भई।' सबैले भने, 'चमेलीले त चमत्कारै गरी गाँठे।'
गाउँमा हर्कबढाइँ भयो। प्लस टू पढाउन शहर पठाएकी छोरी 'ठूलीमान्छे' भएको समाचार नरिभानले तात्तातै पाएन। ऊ बिहानै एक भारी तरकारी लिएर सदरमुकाम गएको अझै फिरेको थिएन। पाँच कक्षा पढेको नरिभान गाउँभरिमा छोरी शहर पढ्न पठाउने एक्लो हो। केहीले उसको तारिफ गरे पनि बुढापाका 'बिहे गर्ने उमेरमा छोरी शहर पठायो' भन्दै गाली गर्थे उसलाई। तर, आज त्यही चमेलीले नाक ठाडो पारी गाउँलेको। किनभने टिभीमा चमेली देखिई!
भर्खरै प्लस टू सकाएकी चमेलीले पत्रिकामा विज्ञापन हेरेर भरेकी थिई, मिस सुन्दरी प्रतियोगिताको फारम । कलेजको छात्रवृद्धि ५० हजार नगद पुरस्कार र आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परले लोभ्याएको थियो। मिस सुन्दरी हुन कति दुःख भयो भन्ने चमेलीलाई मात्रै था'छ। उसले मात्रै बुझेकी छे, 'पैसा हुनेसँग पैसा लिइन्छ, पैसा नहुनेसँग अरू लिइन्छ' भन्ने आयोजकको प्रस्ताव। उसलाई त्यतिबेलै प्रतियोगिता छोडौँ जस्तो नलागेको होइन। तर, चाँडै सेलिब्रिटी बन्ने यो बाटो र घोषणा गरिएको पुरस्कारले ऊ लोभिई। तयार भई, त्यागका लागि। 'कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड्ता है,' एउटा हिन्दी फिल्मको डाइलग सम्झी र चित्त बुझाई। त्यसैको परिणाम आज चमेली मिस सुन्दरी भएकी छे, उसको मोबाइलमा बधाइका ओइरो लागेका छन्। गाउँबाट फोन आएको आयै छन्। रातारात सेलिब्रिटी भई ऊ।
वास्तै नगर्ने छिमेकीले 'बधाइ छ नानी' भन्यो। घरबेटीले 'ठूली मान्छे भइछौ, बेलैमा भाडा दिन्छौ होला' भन्दै बधाइ दियो। बाटोमा पनि मान्छेहरूले आफँैतिर हेरेको महसुस गरी चमेलीले। कलेजमा साथीहरूले टि्रट मागे। पसलको उधारो बुझाउन ठिक्क पारेका पैसा क्यान्टिनमा खर्च गरी, तर पनि चित्त दुखेन। मञ्चमा दिएको एक मिटर लामो ५० हजार रुपैयाँ लेखिएको चेक हेरी। त्यसपछि आयोजकलाई फोन गरी, 'मेरो पुरस्कारको पैसा र गिफ्ट ह्याम्पर खोइ?' उताबाट चुइयाँ आयोजक बोल्यो, 'त्यत्रो सेलिब्रिटी बनाइदियौँ, अब केको पैसा? केको गिफ्ट? बरु ताज सुरक्षित राख्नू। अर्काे वर्ष अर्कीलाई दिनुपर्छ।' आयोजकले यसअघि नै ऊसँग प्रस्ताव गरेको थियो, 'तँ सोझी र राम्री भएकीले ताज दिएका हौँ। यसो घुम्न जाँदा अस्वीकार नगर्नू।'
उसलाई भन्न मन लागेको थियो, 'तेरो सेलिब्रिटी तैँ लैजा।' तर, भनिन। दुई दिनपछि आयोजकले फोन गरे, 'के कस्तो छ, खर्चवर्च चलेकै होला! कामको अफर पनि आयो होला!' उसले ठीकै छ भनेर फोन राखी। कामको अफर नआएको होइन, दुइटा भिडियो र एउटा फिल्मबाट अफर आइसक्यो। तर, उसलाई फिल्मसँगै गरिएका निर्देशक/निर्माताका अफर मन परेनन्।
घरबेटीले भाडा माग्न बिहान–बेलुकी नै धाउन थाल्यो। पसलेले पनि 'नानीको हिसाब गर्ने बेला भाथ्यो' भन्न थालेको पाँच दिन बितिसकेको छ। चमेली सुत्न सकिन। घरबाट उसका बाले पठाएको १० हजार रुपैयाँ अन्तिम स्पर्धाको ड्रेस र साथीलाई टि्रट दिँदैमा सकिइसकेको थियो। काम गरेर पैसा कमाउन चाहन्थी ऊ। तर, उसकी साथी शर्मिलाले जस्तो सेल्सगर्ल हुने अवस्था रहेन उसको। जे त पर्ला भनेर एउटा रेस्टुरेन्टमा रिसेप्सेनिस्टको जागिरका लागि गएकी हो। तर, टिभीमा उसलाई हेरेको साहूले कामको कुरै नगरी स्वागत–सत्कार गर्दै खाजा खुवाएर पठाइदियो।
घरमा पुगेर भित्तामा राखेको खादा र क्राउन भुइँमा बजारी र घुप्लुक्क सुती। त्यतिबेलै गाउँबाट उसका बाको फोन आयो, 'अब त ठूली मान्छे भइस् रे, कमाइ पनि रामै्र होला क्यारे, मैले त यो चंखेलाई पनि तँसँगै पठाम्ने विचार गरेँ। के भन्छेस् त चमेली?' अप्ठेरामा परी चमेली। त्यसपछि भनी, 'हुन्छ बा।' फेरि तनाव थपियो। त्यही बेला फोन आयो, उही आयोजकको । उसले बिन्ती बिसाई, 'सर, मलाई काम खोजिदिनुस्।' ऊ रोई, कराई। आयोजकले पीडामा साथ दिए, 'मैले तिम्रो मर्म बुझेँ। तयार भएर बस, म तिमीलाई लिन आउँदै छु।'
घडी हेरी, रातको १० बजिसकेको थियो। चमेली तयार भई। आयोजकको पुरानै वाक्य सम्झी, 'घुम्न जाऊँ भन्दा अस्वीकार नगर्नू।'
'नीलो ताजमा नजर'
सबिन लिम्बू, मिस नेपाल वर्ल्ड २०१४ कत्तिको खुसी हुनुहुन्छ? शब्दमा व्यक्त गर्न सकिरहेकी छैन। मेरो नाम उद्घोष भएको निकै समयसम्म सपना हो कि बिपना भन्ने छुट्याउन गाह्रो भयो। धेरै खुसी हुँदा पनि...
कुरूप बनाउला क्रिमले!
खानै नपाए पनि सुन्दर देखिने भोक सबैमा हुन्छ। यो भोकले महिला/पुरुष छुट्याउ“दैन। स्वभावैले महिलामा अझै यो भोक चर्को हुन्छ। सौन्दर्य हेर्नका लागि मात्रै पनि होइन। यो अब करिअर र स्ट्याटससँग...
चकलेटी भूमिकामा निकै फिल्ममा अभिनय गरेका अभिनेता यसराज गराच पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकामा देखिने भएका छन्। ऐतिहासिक विषयलाई लिएर बनाइएको फिल्म 'कीर्तिपुर'मा उनी पृथ्वीनारायण भएका हुन्।
चर्को स्वरका चौकीदार
काठमाडौँ, महाराजगञ्जस्थित टिचिङ हस्पिटल छिरेका लगभग सबैलाई याद भइरहने एउटा अनुहार छ। चौकीदारको निलो पोशाक लगाएका, घाँटीमा सिटी भिरेका, अग्लो कदका, ठूलो स्वरमा कराइरहने, सहयोगी स्वभावका ती व्यक्ति हुन्, शेरबहादुर...
पुस २६ गते। बिहान ६ बजे। राहदानी विभागको मुख्य गेटबाहिर सर्वसाधारणको घुइँचो थेग्न प्रहरीलाई हम्मे परिरहेको छ। अधिकांशका हातमा राहदानी फारम छन्। उनीहरू लाइनमा कोचाकोच गर्दैछन्। पुसको कठ्यांग्रिने जाडोमा शीतले अनुहारै चिन्न...
परिहास : बा ! हाम्रो शिक्षा र साक्षरता
देख्नुभो त मुलुकमा शिक्षा शिक्षालय, साक्षरता र शिक्षित संख्याको स्तर? अर्थ (पैसा) ले अब जति निरक्षर पनि अनर्थ रेकर्डमा सबै साक्षर भएको देख्न पाउनु हुनेछ। शिक्षा भनेको यस्तो हुनुपर्छ। हुन...
मेरा बाल्यकाल मुम्बईको चेम्बुर इलाकामा बित्यो। घरमा आमा, बुवा, दिदी र ममात्रै थियौँ। सानो र सुखी परिवार थियो हाम्रो। सानैदेखि हट्टाकट्टा थिएँ। खानाको सोखिन थिएँ। टीभी असाध्यै हेर्थें। पढाइमा पनि...